SONY သတင်းများ - ဖြန့်ချိခြင်းများ၊ ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များ၊ အမြစ်နှင့်အခြားအရာများ - Androidsis | Androidsis
Sony သည် ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ စတင်၍ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ပထမ ဦး ဆုံးဖုန်းများကို Sony Ericsson အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ Sony Xperia ကိုဆက်လက်အသုံးပြုဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ဖုန်းအားလုံးသည် Android ကို operating system အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ စမတ်ဖုန်းများအပြင်ကုမ္ပဏီသည်စျေးကွက်ထဲရှိစမတ်နာရီများကဲ့သို့သောတက်ဘလက်များနှင့် ၀ တ်ဆင်နိုင်သည့်ပစ္စည်းများကိုလည်းထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းတို့တွင်ကင်မရာများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားစက်များသို့မဟုတ်တေးဂီတဖွင့်စက်များရှိသည်။
Sony ဖုန်းများသည်၎င်းတို့၏အရည်အသွေးမြင့်မားမှုကြောင့်လူသိများပြီးဓာတ်ပုံအပိုင်းတွင်အရေးကြီးဆုံးအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ယနေ့ Android တွင်ရှိသည့်အမှတ်တံဆိပ်များစွာအတွက်အာရုံခံကိရိယာများကိုပြုလုပ်ကြသည်။ ၎င်း၏တီထွင်မှုများအတွက်လူသိများကုမ္ပဏီတစ်ခု။ ဤကဏ္တွင်သင်သည် Sony ဖုန်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများ၏သတင်းများ၊ သတင်းအချက်အလက်များသို့မဟုတ်ဆန်းစစ်လေ့လာမှုအားလုံးကိုတွေ့လိမ့်မည်။
Sony Xperia 10 III ကို Snapdragon 690 နှင့်6GB RAM ဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလက Sony သည် Xperia 10 II ကိုအလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းတစ်ခုအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။
Sony Xperia 1 III သည်ဂန္ထဝင်ဒီဇိုင်းနှင့်စတိုင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသည်
por Rafa Rodríguez Ballesteros လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်း .
Sony Xperia 10 II ကို Android 11 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စီစဉ်ထားသည်
Google က Pixel အကွာအဝေးအတွက် Android 11 နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဖြန့်ချိပြီးကတည်းကလများကုန်လွန်သွားသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Xperia Compact အမျိုးအစားကိုဈေးကွက်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်
မြင်းကြီး၊ ဤစကားသည်စပိန်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည် (၎င်းသည်လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများတွင်အသုံးပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ) ...
Sony Xperia5II သည် Android 11 update ကိုစတင်ရရှိခဲ့သည်
Android 11 update ကို Sony Xperia 1 နှင့် Xperia5သို့အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်ဂျပန်ထုတ်လုပ်သူ ...
Sony က Android 11 ကိုပထမဆုံးလက်ခံရရှိတဲ့စမတ်ဖုန်းကိုကြေငြာလိုက်သည်
Android 11 စနစ်သည်မကြာမီတွင်သုံးလကြာလိမ့်မည်။ သို့သော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသို့မရောက်ရှိသေးသော်လည်း၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောစမတ်ဖုန်းများသို့လာမည်။
Sony ကစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Qualcomm ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူရောက်ရှိရန်အဆင့်မြင့်ဟုသတ်မှတ်ထားသည့်ဖုန်းအသစ်များအနက်မှတစ်ခုကိုကြေငြာလိုက်သည်။
Sony Xperia5II ဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုခဲ့သည်
por Nerea Pereira လွန်ခဲ့တဲ့ 11 လအတွင်း .
Sony Xperia5II သည်အလင်းကိုမြင်ရန်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Sony Xperia5II ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုပြသထားသောဗွီဒီယိုတစ်ခုပေါ်လာသည်
လက်ရှိတွင် Sony ၌ Sony Xperia 1 II ကိုဝယ်ယူခြင်းသည်အရေးကြီးဆုံးအော်ပရေတာနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။
Sony Xperia XA2, XA2 Ultra နှင့် Xperia L2 တို့ကို BestBuy တွင်ကြိုတင်မှာယူနိုင်သည်
Las Vegas ရှိ CES တွင်နားကြပ်အသစ်ကို Sony ကြေငြာခဲ့သည်
ဤရွေ့ကားအားလုံး Xperia XA2, XA2 Ultra နှင့် L2 ၏ပေါက်ကြားသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည်
လာမည့် Sony XZ ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာပေါက်ကြားသွားပြီဖြစ်သည်
Sony Xperia R1 နှင့် R1 Plus: Sony ဖုန်းအသစ်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်စျေးနှုန်း
Xperia X ကင်မရာသည် terminal ကိုအပူပေးသော bug တစ်ခုနှင့်ကြုံတွေ့နေရသည်
Android5Lollipop နှင့် Android 5.1 Marshmallow ပါသော Xperia Z6.0 ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကွာခြားချက်မှာကြီးမားသည်
Sony Xperia Z5 ၏ Steady Shot mode သည်ဤသို့ဖြစ်သည်
မည်သည့် Android တွင်မဆို Xperia Z3 Walkman application ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကို Download လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ
Sony Xperia Z3 နှင့် Xperia Z3 Compact ကင်မရာပြproblemsနာများ
KitKat ကိုတရားဝင်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးနောက် Xperia Z အကွာအဝေးရှိဘက်ထရီသုံးစွဲမှုပြconsumptionနာများကိုဖြေရှင်းခြင်း